नेपाली ‘तरकारीवाली’ विश्‍वकै सबैभन्दा सेक्सी (भिडियो) - Arghakhanchi Saptahik
नेपाली ‘तरकारीवाली’ विश्‍वकै सबैभन्दा सेक्सी (भिडियो)
भाग्यले कतिवेला साथ दिनेहो भन्ने कुराको हेक्का हामीले कहिल्यै राख्न सक्दैनौं । यस्तै नेपालको एक गाँउमामा कृषि कार्य गर्दै आफ्नो जीवन विताइरहेकी एक युवती को सायद भाग्य वलियो भएर हुनसक्छ, एकाएक छोटोसमयमा संसारभर चर्तित भइरहेकी छन् । उनको तरकारीवोकेको फोटो र तरकार बेच्दै गरेको
फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।
फोटो पर्यटन व्यसायी रुपचन्द्र मर्हजनले नेपालका गाँयघुम्ने क्रममा उक्त दृष्यलाई कैद गरेका थिए र उनले नै पहिलो पटक आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत उक्त दुई फोटोहरुलाई सेयर गरेका थिए । उक्त दृष्य गोरखाको भुम्लिचोक गाविसको त्रिशुली नदीमा रहेको झोलुगंगेपुलमा लिइएको हो ।
फोटो पत्रकारले आफ्नो वालमा सेयर गर्ने विक्तिकै ती तरकारीवालीको फोटोलाई धेरैले मन पराएर सामाजिक सञ्जालमा तरकारीवाली हसट्याग राख्दै सेयर गरेका थिए । उक्त सून्दर नेपाली युवतीको फोटोलाई धेरै भारतीय हरुले मेहनती युवती र तरकारीवाली भनेर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेकोले भाइरल भएको देखिन्छ ।
उनीहरुले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टुविटरमा तरकारीवाली भनेर निकै सेगर गरेका छन् ।
यसअघिपनि पाकिस्थानका अरसद खान निलो आँखा भएको चियावालको केही फोटोहरु एन्टरनेटमा भाइरल भएको थियो । जस कारण उनी यति चर्चित भएकी उनलाई मोडलिगं गर्न र चलचित्रमा खेल्नको लागि अफर समेत आएको थियो ।
भाग्यले साथ दिएपछि कहाँवाट कहाँ पुगिन्छ भन्ने कुरालाई चरितार्थ गर्दै उक्त चिया बेच्ने केटा एकाएक मोडल बनेका थिए ।
त्यस्तै नेपालकी तरकारीवाली पनि निकै सुन्दर र आर्कर्षक देखिन्छिन् । उनको जिउडाल र मुस्कार हेर्दा साच्चै नै सेलिबे्रटि हुन लायकको नै छ ।
यति वेला उनको भाग्ले उनलाई साथ दिइरहेको छ त्यसैले उनी केही दिनमा तरकारीवालीको नामले नै विश्वभर चर्चित भएकी छन् ।
के यही चर्चाले उनको भाग्य बदल्न सक्छ ? भन्ने कुराको बहस पनि सामाजिक सञ्जालमा शुरु भएको छ ? पाकिस्थानको चियावालाको जस्तै उनी पनि सेलिब्रेटि बन्न सक्छिन् त ? के उनको भाग्यले उनलाई तरकारी बेच्ने केटी वाट एक टप मोडल तथा सेलिब्रेटि बनाउन सक्छ होला त ?